साहित्य – Karnalitimes
सुर्खेत। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारले ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख परियारले प्रमाणीकरण गरेको उक्त विधेयक अब ऐनमा परिणत भएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको दशौं अधिवेशनको तेस्रो बैठकबाट ‘कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएको थियो। उक्त विधेयक उनले जेठ ११ गते नेपालको संवि
सुर्खेतमा ‘मोक्षभूमि’मािथ सिंजा संवाद
सुर्खेत। उपन्यास ‘मोक्षभूमि’माथि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा संवाद गरिएको छ। कर्णाली साहित्य समाजले शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा ‘मोक्षभूमिमाथि सिंजा संवाद’ आयोजना गरेको थियो। मोक्षभूमिका लेखक तथा उपन्यासकार केशव दाहालसँग कर्णाली साहित्य समाजका संस्थापक संरक्षक महेशविक्रम शाहले संवाद गरेका थिए। मोक्षभूमिको लेखन, उपन्यासमा भएको विषयवस्तु, कृतिले दिने सन्देशलगायतका विषयमा लेखक दाहालसँग संवाद गरिएको हो।
कर्णालीकै ठूलो कृति पुरस्कार यस बर्ष ‘जियारा’लाई
सुर्खेत। कर्णाली साहित्य समाजले वर्ष २०७७ को कर्णाली साहित्य समाज कृति पुरस्कार नयनराज पाण्डेको कृति ‘जियारा’लाई प्रदान गर्ने भएको छ। ५० हजार राशीको उक्त पुरस्कार २०७७ सालभित्र प्रकाशित कृतिहरु मध्येबाट छनोट गरेर जियारालाई दिने निर्णय गरिएको हो। आख्यानको नवीन विषयवस्तु, शिल्प र शैलीको प्रयोग गरिएको उक्त कृति मधेसका समाजमा विद्यमान पारम्परिक कुप्रथा, रुढीवादी संस्कार र अन्धविश्वासमाथि प्रहार गरि
नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०८ औँ जन्मजयन्ती आज देश तथा विदेशका विभिन्न स्थानमा समेत विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। सरल नेपाली भाषामा लेखिएको अयोध्याका राजा रामको जीवनीलाई भावानुवादसहितको ‘रामायण’ प्रस्तुत गरेर भानुभक्तले नेपाली जनतालाई ठूलो गुन लगाएका थिए। उनले लेखेको रामायण अहिले पनि नेपालीको घर–घरमा लयसाथ पाठ गरिन्छ। पृथ्वीनारायण शाहले भौगोलिक रूपमा एकीकरण गरेको नेपाल
शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई कर्णाली साहित्य समाज साधना सम्मान
सुर्खेत । कर्णाली साहित्य समाज सुर्खेतले स्थापना गरेको कर्णाली प्रदेशकै ठूलो राशीको पुरस्कार ‘मोहपथ’लाई प्रदान गरेको छ । ललित विष्टद्वारा लिखित मोहपथलाई ५० हजार राशिको पुरस्कार प्रदान गरिएको हो । बुधवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कर्णाली साहित्य समाजले स्थापना गरेका विभिन्न पुरस्कारहरु श्रष्टा तथा कृतिहरुलाई प्रदान गरिएको हो । यसैगरी शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई ‘कर्ण
‘हजुर अधिकृतबाट बढुवा भएर खरिदार हुने कहिले हो ?’
सुर्खेत । नायब सुब्बा पदमा कार्यरत श्रीमानको बढुवा हुन्छ। शाखा अधिकृतमा बढुवा भएका श्रीमानले घरभित्र पसिनसक्दै श्रीमतीलाई खुसीको कुरा सुनाउँछन्। लामो समय नायब सुब्बा पदमा रहेर काम गरेका श्रीमान आफूले अरू सयौं जना प्रतिपर्धीभन्दा बढी नम्बर ल्याएर अधिकृत बन्दा निकै खुसी छन्। श्रीमती जागिरमा पदको बारेमा थाहै पाउँदिनन्, चासो पनि गर्दिनन्। त्यसैले उनको अनुहारमा श्रीमान नायब सुब्बाबाट अधिकृत भएको खुस
लकडाउनमा डा. मल्लका सिर्जनात्मक अभिव्यक्ति
फूल थरिथरिका हुन्छन् । ती फूल आ–आफ्नो याममा फुल्छन् । सिर्जनाका फूल फुल्न पनि त्यस्तै अनुकूल मौसम चाहिन्छ । प्रायशः शान्त र मनोरम वातावरणमा सिर्जनाका फूल फुल्छन् । कोरोना प्रकोप र लकडाउन मानव जीवनको लागि हरेक दृष्टिले प्रतिकूल भए पनि साहित्य सिर्जनाका लागि भने उर्वर समय बनेको छ । यही मौकामा साहित्यकार डा. महेन्द्रकुमार मल्लले आफ्नो साहित्यरुपी बगैंचामा सुन्दर फूल फुलाएका छन् । आज ! पहाडमा जूनक
नविन कुमार पाण्डेय आमा म बाट ठुलो भुल भयो । बाबा को उपचार मा लागेको ऋण तिर्न बिदेशिनु भुल भयो ।। कान्छो भाई को फाटेका कपडा फेर्ने सोच बनाउनु भुल भयो । बहिनि को च्यातिएको किताब को गाथा हाल्ने सोच बनाउनु भुल भयो ।। बाबाको किरिया खर्चको लागि लालपुर्जा राखी साहुबाट लिएको ऋण तिरी आफ्नै नाममा खेतबारी बनाउने सोच राख्नु भुल भयो । त्यही भुलले त आज म विदेशी भएको छु ।।। त्यही बिदेशी भुमि को सिमाना ब
ए सरकार ! सुन म एक श्रमिक भयानक रोग भन्दा भयानक त भोको पेट रहेछ बुझेकी छु, भोगेकी छु म बन्दी बन्न सक्दिन कति दिन ?हप्ता वा महिना ? म पर्खिन सक्दिन मनभित्र अराजकताले कोलाहल मच्चाइरहेछ, म के गरुँ ? (१) गुमनाम भएर बाँच्न पनि सक्दिन रित्तो पेट सँगैै मनमा क्रोधको राँको बल्छ युद्ध गरौं को सँग ? आफ्नै विरुद्ध भोकले युद्द गरिरहेछ सन्तानहरुको कोलाहलले आकृष्ट मेरो मन छिद्र छिद्र भएर